China Umbane we-UV, ukuhanjiswa kwamanzi, ukuqaqamba kwebhrashi yoshicilelo lweenwele kunye nefektri yokuphatha kunye nabenzi | Yongsheng
Umbane we-UV, ukuhanjiswa kwamanzi, ukuqaqamba kwebrashi yokushicilela iinwele ngesiphatho esiyiliweyo
Umbala: Igolide, luhlaza, intyatyambo… ulwenziwo.
I-S09-2286S, i-S09-2586S, i-S09-2151S, i-S09-2152S
I-S09-2586S, i-S09-2554S, i-S09-2561S, i-S09-2562S
ElandelayoI-S121-2586S, S121-2185S, S121-2187S, S121-2143S
S140-2586S, S140-2151S, S140-2143S, S140-2111S usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
I-S148-2586S, i-S148-2151S, i-S148-2213SC, i-S148-2152S
I-T90-2151S, T90-2143S, T90-2127S, T90-2214SC
T150-2586UV, T150-2214UVC, T150-2143UV, T150-2152UV usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Iphakheji yesiqhelo: Ibhrashi nganye enengxowa ye-nylon evulekileyo.12PCS / ibhokisi yangaphakathi.120PCS / ibhokisi.
Ipatheni ethandekayo + i-Flexible Cushion + i-Boar Natural Bristles + i-Nylon Bristles ethambileyo. Ithambile kwaye inika isikhumba sakho sentloko kunye neenwele kwimeko yemvelo usebenzisa indlela esetyenzisiweyo kangangeenkulungwane. Xa iinkunzi zehagu ziqinisa iinwele zakho, ixesha elide, eliqinileyo kodwa eliguqukayo liyinylon bristles efikelela kwisikhumba sakho ngaphandle komzabalazo, uphulula yonke intshi yentloko yakho. Zonke iimilo zentloko zinokusetyenziselwa nasiphi na isibambo.
Ibrashi ejikelezayo yoBume boomama baMadoda kunye naMadoda nokuba yeyiphi na iinwele, isitayile seBrushes esinokuSebenza ngakumbi nokuba ufuna iRound, Vented okanye Straight brush. Umgangatho ojikeleze ibrashi yokuhombisa unokukunceda ulungelelanise kwaye ujije imfuneko yesalon kunye nekhaya. Ezi bhrashi zeenwele zigqibeleleyo ngeNwele ezinde okanye eziFutshane, eziQinisekisiweyo okanye eziQhelekileyo, ziQinisekile okanye ziLungile. Iibrashi zethu ziyilelwe ukuba ziHambise ngalo naluphi na uhlobo lweenwele ezisusa ii-Tangles ngelixa zisenza iinwele zithambe. Isebenza ngokuLungileyo kwiinwele eziManzi okanye ezomileyo kwaye ifanelekile emadodeni, kubafazi nakubantwana.
Ezi brashi zeenwele zinokuba kunye nokuprinta kombane kwe-UV, ngeentyatyambo, ukuprintwa kokuhanjiswa kwamanzi ngomthi, ukuqaqamba koshicilelo olunemibala. Uyilo olukhethekileyo olunamabrashi alungele umthendeleko kunye nezipho. Sine-20 yoyilo esele ikho. Kananjalo uyilo lunokwenziwa ngemfuneko. Unganikezela ngoyilo lwakho ukuba siyakuhlonipha ngokungqongqo ubumfihlo beemveliso zakho.
Egqithileyo Ukutyabeka ngerabha, umbane we-UV, ukushicilela ukukhanya, ukuhambisa iinwele ngebrashi eneebhanti zeIntelliflex
Okulandelayo: Irabha yokutyabeka iinwele ngebrashi eprintwayo enemibala ngesiphatho sokuyila
Iibhrashi zeenwele ezininzi
Iplastiki bristle Hair Brush
Iplastiki yebrashi yeenwele
Iplastikhi yeenwele zePlastiki zeBrashi
Irabha yeenwele zerabha
Ibrashi yeenwele zomthi
Umbala werabha wokutyabeka iinwele zakudala ngebrashi ...